Ciidamo ka tiran Amisom oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb+sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Ciidamo ka tiran Amisom oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb+sawirro
Dhuusamareeb(SONNA) Ciidamo ka tirsan Howlgalka Nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom ayaa maanta gaaray Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug halkaasoo uu ugasii horeeyey Taliyaha guud ee Amisom.
Ciidamadan oo ka socda Dalka Jabuuti kana qaybta ah Howlgalka AMISOM ayaa waxaa soo dhaweeyey Saraakiisha Qaybta 21aad ee Ciidamada Xoogga Dalka, Xildhibaano Heer Federaal ah iyo Bulshada deegaanka kuwaasoo uga hortagay duleedka Dhuusamareeb, waxaana haatan garoonka kubadda cagta ee dhuusamareeb ka socota Munaasabad lagusoo dhaweynayo.
Ciidamada ayaa xalay soo maray Magaalada Guriceel iyagoo ugasii ruqaansaday Magaalada Dhuusamareeb, Halkaasoo ay ka socdaan Howlo loogu gogol xaarayo doorashada madaxtinimada Galmudug.
Saraakiisha Hogaaminaysa Ciidamadan AMISOM ayaa waxay sheegeen in Ciidamadan ay ka qayb qaadanayaan Sugida Amniga iyo la dagaalanka kooxda Argagixisada ee Alshabaab.
Sidoo kale Saraakiisha Ciidamada Xoogga Dalka ayaa dhankooda sheegay in ciidamadan inta ay joogaan ay ka qeybqaadan doonnaan Howlo muhiim oo dhinaca Amniga la xiriira.
“Ciidamada walaalaheen ee hiil-walaal ee ka socda dalka Jabuuti hadana u yimid inay naga caawiyaan arimaha Amniga, shirarka socda, iyo la dagaalanka Argagaxisada intuba waxaan rajeynayaa inay si fiican noogala shaqeeyaan, si waynna waan usoo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay inay noo imaadaan” ayuu yiri Taliyaha Qeybta 21 aad ee Ciidamada Xooga Dalkeenna Gen Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje oo ka hadlayey goob fagaara ah oo Ciidamadaas lagusoo dhaweynayey
Dhinaca kale Shirkii Dib uheshiisiinta Galmudug ayaa la filayaa in dhawaan uu ka furmo Magaalada Dhuusamareeb iyadoo badi ay halkaas gaareen Ergooyinki loo qorsheeyey inay shirkaas ka qeybgalaan.